Sprinter iray avy any Bealalana hitodi-doha aty Antananarivo, no vaky kodiarana, ka nampivadika ilay sprinter. Tao amin’ny vaki-paritra Tobinjanahary, kaominina Mahavelona, distrikan’Ankazobe, faritra Analamanga, amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny no nitrangan’ny loza, omaly talata vao mangiran-dratsy, tokony ho tamin’ny 3 ora maraina. Manodidina ny 12 kosa ireo naratra izay efa nentina namonjy ny hopitaly tao Mahitsy sy tao Ankazobe. Araka ny fanazavana voaray avy amin’ny mpitandro ny filaminana, dia naharay antso ny zandarimaria avy ao amin’io Tobinjanahary io, ka namonjy teny an-toerana. Tsy tratra tao an-toerana intsony ny mpamilin’ilay taksiborosy sprinter, hoy ny zandary, fa vaky nandositra ary anisan’ny nety ho naratra vokatr’io loza io ihany koa. Tonga nankahery ireo naratra tao amin’ny hopitaly notsidihany moa ny depiote voafidy tany an-toerana, niaraka tamin’ny ben’ny tanàna sy ny tompon’andraiki-panjakana. Efa nanokatra ny fanadihadiana mikasika ity loza nahafatesana olona ity, ny zandarimaria avy ao Ankazobe.